Ny mozika sy ny tononkira rahampitso dia tonga haka printy i Dadabe Claus
Tonga ny Tomasy ny Tomorrow - fanamarihana sy lahatsoratra
Rahampitso tonga ny andinin-tsoratra masina Santa Claus
Ny mozika sy ny soratra vita soratra dia rahampitso tonga ny Santa Claus
Rahampitso dia tonga i Santa Claus
tonga miaraka amin'ny fanomezam-pahasoavany.
Loko marevaka, volombava volomparasy,
Ankizy manana baka, ondry ary omby,
Shaggy Shaggy sy panther
Te-hanana izany aho.
Ento izahay Santa,
Omeo azy rahampitso, ento
fiaramanidina tsara tarehy,
Farm miaraka amin'ny akoho sy akoho,
ireo zavatra tsara rehetra.
Kanefa fantatrareo ny fanirianay,
Fantaro ny fonay.
Ankizy ray sy reny,
ny rehetra, isika rehetra,
miandry anao amin'ny alahelo.
Fanamarihana avy amin'ny Krismasy Carol Tomorrow, dia hisokatra ny endriky ny Santa Claus ho toy ny tahirin-tsary
Aiza avy ny oram-panala? ankizy fanontaniana
Pejy fanolorana Christmas - Santa Claus